Sonos Otu, anyị na-enyocha ihe ịma aka kachasị nke HomePod | Akụkọ akụrụngwa
Sonos Otu, anyị na-enyocha ihe ịma aka kachasị nke HomePod
Anyị nwere Sonos Otu n'aka, nke pere mpe nke ngwaọrụ smart nwere onye inyeaka olu nke Sonos nwere n'ọtụtụ ya… Want chọrọ ịma ihe anyị chere maka obere ngwaahịa a? Nọnyere anyị ma chọpụta ihe kpatara eji edozi ya dị ka ihe kachasị mma n'ahịa dị iche iche.
HomePod dị n'akụkụ nkuku, ọ nwere ike ọ bụghị karịa na ActualidadGadget anyị ga-eme nyocha ya, mana anyị ga-eburu n'uche na HomePod abụghị onye na-ama aka ịkụ aka, ọkà okwu nwere ọgụgụ isi site na ụlọ ọrụ Cupertino rutere n'ahịa nke ngwaọrụ ndị mara mma nke na-enye ụda dị elu ebe enwere onye ndu doro anya. iti, Sonos.
Dị ka oge niile, nyocha anyị ga-ekpuchi nkọwa nke ngwaọrụ a na ebumnuche nke ime ka ị chee na ị nwere ya n'aka gị, yabụ ị nwere ike ikpebi ma ọ bara uru ịzụta ma ọ bụ na ọ baghị uru, ka anyị gaa ebe ahụ.
1 Akụrụngwa na imewe: Sonos mma, mma gosipụtara
2 Nka na uzu: Elu àgwà na nkenke ọdịyo
3 Enyemaka olu: Ee, mana n'ọdịnihu
4 Uche Editor banyere Sonos One
Akụrụngwa na imewe: Sonos mma, mma gosipụtara
N'oge a, anyị agaghị echebiga echiche ókè na nghọta ma ọ bụ na nke a bụ Sonos Otu bụ ngwaahịa dị mma, echere m na onye ọ bụla bịara ịzụta ihe dị ka nke a chere na ọ bụ, Sonos abụghịkwa akara na-enweghị obi abụọ.. Anyị nwere ntọala polycarbonate dị elu na nke ala, na njikwa njikwa mgbasa ozi na ọkụ ọkụ na-egosi ọkụ dị n'elu ebe anyị nwere ike ijikwa ihe niile na ndị ọzọ (gụnyere onye inyeaka olu n'ọdịnihu. A na-ewukwasị igwe okwu igwe na aluminom ọzọ, mana oge a, anyị nwere ya ka agbapụtara ọcha iji nye aka na-aga n'ihu na ngwaọrụ ahụ, nwata na-eme nke ọma.
Azụ bụ maka njikọ Ethernet na bọtịnụ maka njikọ. Anyị chọpụtara na akụkụ dị ka nke Sonos Play: 1, anyị nwere 161,45 x 119,7 x 119,7 millimita, na ngụkọta arọ nke 1,85 n'arọ. Nkwakọ ngwaahịa ahụ bụ ihe ị ga-atụ anya ya, nke yiri Sonos Play: 1, ha nwere akwụkwọ mmado nwere ntuziaka.
Anyị enweghị obi abụọ na nke a Sonos Otu ga-adị mma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla, dịka ụmụnne ya ọ na-eguzogide iru mmiri, yabụ ị ga-ama ebe ị debere ya, ọ gaghị abụ nsogbu. Ọ bụ diaphanous, dị mfe ma maa mma, ya mere ị gaghị enwe ọtụtụ mkpesa mgbe ị na-etinye ya ebe ịchọrọ, ọ ga-esiri ya ike ịdị njọ, N'ezie, na foto anyị, ị ga - ahụ na anyị ejirila ngwa ụlọ ndị ọzọ mara mma na ụdị Nordic ọzọ wee nwee ike ịhụ na ọ naghị ese okwu ebe ọ bụla ọ na - aga.
Nka na uzu: Elu àgwà na nkenke ọdịyo
Sonos enweghi obi uto inye otutu ihe omuma banyere ngwaike nke ngwaọrụ ha, anyi nwere afọ ojuju n’ịmara nke ahụ na-arụ ọrụ nyocha ụzọ abụọ (nke dị n'etiti na nke atọ), ya na ndị na-eme ihe ngosi dijitalụ 'D' abụọ nke bụ ihe na-enye ụdị ụda a dịgasị iche iche nke na-eme ka ọkà okwu a bụrụ otu atụmatụ dị ukwuu, ike na karịa ogo niile dị na olu zuru ezu. Anyị ga-enwe ike ịkpọ AAC, AIFF, Apple Lossless, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV na WMA.
Njikọta agaghị enwe nsogbu, anyị nwere Wi-Fi 802.11b / g na 2,4 GHz na ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet 10/100 (anyị anaghị achọkwu maka egwu egwu). Ọzọkwa, ana m ahụ dị ka isi ọjọọ (na ihe ijuanya na ngwaahịa North America), na-enweghị 5 GHz Wi-Fi, nke ndị ọrụ na-achọwanye. Ọ na-aga n’ekwughị na ịbụ Wi-Fi ma ọ bụghị Bluetooth anyị ga-enwe ike iwepụta gburugburu Multiroom nke na-enye anyị ohere ịmepụta eriri egwu n’ụlọ anyị n’ụzọ kachasị mfe. Agbanyeghị, ka anyị kwụsị na isi okwu, Onye a Sonos Otu nwere igwe okwu igwe ogologo oge isii nke ga-enwe ike ijide nkwupụta anyị iji soro ndị enyemaka olu kachasị dị na ahịa rụọ ọrụ.
Na-arụ ọrụ ọzọ na-eji ọkọlọtọ ike USB ma na-emegharị ka imewe nke Sonos na-ike n'ime Chassis na 100-240 V na a ugboro ole nke 50-60 Hz, ị kwesịrị ị na-echegbu onwe banyere oriri.
Enyemaka olu: Ee, mana n'ọdịnihu
Ọ bụrụ na ibi na Spain ma ọ bụ Latin America, biko nwute, ịgaghị enwe ike iji Alexa ma ọ bụ Google Assistant mee egwu gị. Ha ekpebiela nke a, ọ bụ ezie na site na Sonos na weebụsaịtị nke ha na-agwa anyị na onye na-akwado olu na Spanish na-abịarute na mmelite n'ọdịnihu. Ka ọ dị ugbu a, ị ga-ekpebi ịnụ ụtọ nhọrọ niile ọ na-enye anyị, dịka ọdịyo site na Wi-Fi, nke na-enye anyị ogo nke anyị agaghị enweta na Bluetooth n'ọnọdụ ọ bụla, n'ezie, ị kwesịrị ịma na ị bụ na-azughi a okwu Bluetooth iji, na-eme ya onwe ya ma tedious n'otu oge. N'okpuru ebe a bụ "obere" ndepụta ọrụ egwu niile dakọtara na Sonos na ngwa ya. Ozugbo anyị nwetara ya, igwe okwu igwe ya dị ogologo ga-eme nke ọzọ. Anyị na-echeta na ụzọ ndị ọzọ dịka HomePod adịghị na Spanish.
Maka ihe a niile, ngwa a na - ekpebi ngwa ngwa, anyị agaghị enwe ike ịhazigharị ọrụ egwu yana ọbụlagodi njikwa ọtụtụ ụlọ site na ya (ọ bụrụ na anyị chọrọ, otu oge a gbanwere ya adịghị mkpa iji ya), mana anyị nwere usoro ga-enyere anyị aka inyocha ọnụ ụlọ ahụ site na ekwentị anyị iji nye anyị ụda kacha mma na-enweghị onyinye mgbape ma ọ bụ reverberations, ma n’ime ụlọ ma n’èzí, nke na-ekwe nkwa na Sonos Otu dị ka ọ dị mma na obere olu dị ka ike zuru oke, anyị enweela ike ịchọpụta nke a na Actualidad Gadget, ihe Sonos kpọrọ Ultra Sound.
Uche Editor banyere Sonos One
Anyị anwalebeghị ngwaọrụ ahụ, anyị enweela obi ụtọ na ngwaọrụ ahụNke ahụ kwuru, mgbe ị jiri ohere Sonos Otu n'aka Sonos ọzọ dị ka Play: 1, ị ghọtara na ịchọghị ihe ọ bụla ọzọ ma a bịa n'ihe egwu. Qualitydị dị mma maka ngwaahịa nke nha a, enweghị batrị na eziokwu na anyị na-egwu egwu site na Wi-Fi kwesịrị ịnwe ihe dị mma, mana ọ bụghị otuto niile na-aga na njikọta, ngwaike nke Sonos tinyere. n'okpuru Chassis ọ bụ ihe zuru oke ụta, nke a doro anya na ọ na-etinye ya na elu nke ụdị dịka Bang & Olufsen n'agbanyeghị ntorobịa ahụ (Sonos mụrụ na 2002).
E kwesiri iburu n'uche na Sonos One abụghị onye maara ihe na Spain dị ka United States, maa-adịghị agbanwe agbanwe na mpaghara nke anyị mobile ngwaọrụ anyị enwewo ike ịnweta mebere nnyemaaka nke Alexa ma ọ bụ Google nnyemaaka, a n'ezie ihere. Otú ọ dị, anyị na-eche ihu ịzụta oge ọkara, Ndị na-enyere olu aka ga-adịwanye na ụlọ anyị, na Sonos One a doro anya na ọ ga-enwerịrị ihe ọzọ maka onye ọrụ ọ bụla nke ụda, imewe, na n'ezie, teknụzụ.
Atụmatụ na arụmọrụ
Enweghị Bluetooth bụ ihe na-adịghị mmaDịka ọmụmaatụ, ị gaghị enwe ike iji ekwentị gị kpọọ egwu kachasị amasị gị na YouTube. Ma nke a bụ n'aka nke ọzọ gbakwunyere, ọ bụ ụzọ Sonos nwere iji gbochie ụda dị ala nke ndị na-ekwu ya ga-eme ka ọ gbaghaa onye ahụ. Nke ahụ dị mma, Sonos Otu bụ ngwaahịa agbadoro anya maka ndị na-ege ntị doro anya n'ihe gbasara ọnụahịa na arụmọrụ, ọ bụrụ na ịchọrọ egwu na teknụzụ ị ga-enwe ekele maka ya, ọ bụrụ na ị na-achọ naanị ọkà okwu ikwu okwu, tụlee ndị ọzọ uzo ozo. Nwere ike nweta ya Sonos Otu na ibe ya site € 229.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Sonos Otu, anyị na-enyocha ihe ịma aka kachasị nke HomePod
Kedu njikwa iji zụta maka nwatakịrị